नायिका पूजा शर्मा र आकाशको भिडियो भयो भाइरल – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/नायिका पूजा शर्मा र आकाशको भिडियो भयो भाइरल
नायिका पुजा शर्माको जन्म २०४९ बैशाख् १८ गते सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा भएको हो । उनले नेपाली कथानाक चलचित्र थ्रि लबरबाट यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन् । चलचित्र थ्रि लबर को निर्देशक चलचित्र पत्रकार सुरेश दर्पन पोख्रेल हुन । नायिका पुजा शर्माको स्टारडम कति छ ? उनकै कारण चलचित्र चल्ने सम्भावना छ त ? यसअघिका चलचित्र उनकै कारण चलेका छन् ?**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **